Miverina indray ireo voromaherimpaty ao Pokhara · Global Voices teny Malagasy
Ampahany lehibe amin'ny rafi-tontoloiainana ao Nepal ny voromaherimpaty
Voadika ny 27 Jolay 2021 4:26 GMT
Sary avy amin'i Krishna Mani Baral tao amin'ny Nepali Times. Nahazoana alàlana.
Ny Nepali Times no namoaka voalohany ity lahatsoratra avy amin'ny mpanao gazety Krishna Mani Baral ity. Navoakan'ny Global Voices eto indray ny lahatsoratra nasiam-panovana ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Matetika ny tondra-dranon'ny fotoanan'ny orana miteraka fahafatesana sy fahasimbana any Nepal, saingy tsy vaovao ratsy izany ho an'ny voromaherim-paty ao amin'ny Lohasahan'i Pokhara any Andrefan'i Nepal izay mihinana ny fatin'ireo biby maty entin'ny renirano Himalaya.
Niteraka tondra-drano nanerana an'i Nepal afovoany ny fiatombohan'ny oram-be mivatravatra ary niteraka fihotsahan'ny tany izay nanakana ny arabe. Na dia nitondra fahoriana ho an'ny olombelona aza izany, ny vorona mpihaza kosa miosanosana mihinan-kanina.
Alika iray manenjika andiana voromaherimpaty Himalayana eo amoron'ny renirano Fhusre any Pokhara. Sary avy amin'i Krishna Mani Baral tao amin'ny Nepali Times. Nahazoana alàlana.
Noho ny haivan'ny toerana, ny toetrandro malefaka sy manakaiky ny tendrombohitra Annapurna izay 8000 metatra mahery ny haavony, ny lohasaha Pokhara no toeram-ponenan'ireo karazam-boromaherimpaty miisa sivy any Azia Atsimo.
Mety tokoa ho an'ireo voromaherimpaty izay mandihy mitsingevaeva sy mihodikodina mitady sakafo eny amin'ny tany ny lohasaha. Nalaina tahaka tamin'ireo voromaherimpaty mitsingevaeva ireo mpitsambikina amin'ny elon'aina, izay matetika miaraka amin'ireo vorona eo ambonin'ny Sarangkot, ka mahatonga an'i Pokhara ho lasa toerana iraisam-pirenena ankafizin'ny mpanao ilay fanatanjahantena.
Ny kolontsaina sy ny mpitsambikina amin'ny elon'aina ao amin'ny Sarangkot ao Pokhara. Sary avy amin'i Krishna Mani Baral tao amin'ny Nepali Times. Nahazoana alàlana.
Nahazo laza ratsy ny voromaherimpaty noho ny fahazaran-dratsiny mihinana zava-maharikoriko, saingy ampahany lehibe amin'ny rafi-piainana ara-tontolo iainana ao Nepal izy ireo amin'ny fiarovany ny olombelona sy ny biby amin'ny aretina isan-karazany rehefa mihinana faty. Na dia toa tsy miovaova aza ireo voromaherimpaty any an-tendrombohitra Nepal, dia mihena ny isan'izy ireo any amin'ny lemaka sy manerana an'i Azia Atsimo.
Tato ho ato dia tsy ampy ny sakafo sy ny toeram-pialofana ho an'ny voromaherimpaty. Mirongatra ihany koa ny fahafatesana vokatry ny fikasohana amin'ny herinaratra mahery. Fanampin'izany, ny fanapoizinana tsy an-kanavaka ny biby mandehandeha amin'ny fanafody famonoana bibikely dia mandoto ny loharanon-tsakafon'ireo voromaherimpaty ka mitarika ny fahafatesana marobe.
Tamin'ny volana Aprily 2021, voromaherimpaty miisa 69 amin'ireo karazany efatra (voromaherimpaty misy rambony fotsy, voromaherimpaty Himalayana, voromaherimpaty moanina ary voromaherimpaty lava vava), izay ny roa amin'izy ireo dia efa tandindomin-doza ao amin'ny lisitry ny vorona IUCN no hita faty teny amin'ny tokotanin'ny lisea iray tao Nawalparasi.
Ny fanadihadiana voalohany no nahitana ny antony nahatonga ny fahafatesana avy amin'ny poizina famonoana bibikelin'alika izay loharanon-tsakafo mahazatra ho an'ny voromaherimpaty. Fihemorana goavana tamin'ny ezaka nahomby nataon'i Nepal tamin'ny fiarovana ny vorona tsy ho lany tamingana taorian'ny nanombohan'ny fahafatesana misitery tamin'ny taompolo 1990 io zava-nitranga io.
Ny fanafody antsoina hoe Diclofenac izay nampiasaina tamin'ny fitsaboana biby fiompy marary no nahatonga ny fihenana. Diclofenac 30 ml fotsiny dia afaka mamono voromaherimpaty miisa 800. Taorian'izay, norarana ny steroida tao Azia atsimo sy Nepal amin'ny taona 2006.
Nanomboka tamin'izay, niasa tsy tapaka tamin'ny famelomana ny isan'ny voromaherimpaty ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ireo vondrona mpiaro ny voajanahary ao amin'ny firenena, ao anatin'izany ny fananganana ‘toeram-pisakafoanana jatayu’ (JR) -toeram-pisakafoana ho an'ny voromaherimpaty- izay manome hena azo antoka sy tsy voaloto ho an'ny voromaherimpaty ary hikarakarana ihany koa ireo zanaka voromaherimpaty voavonjy.
Ao amin'ny JR ao Ghachok, Kaski, afaka mahita ny karazam-boromaherimpaty miisa 5-6 isanandro ny olona. Niorina tamin'ny taona 2006, fandaharan'asa famahanana sakafo ho an'ny voromaherimpaty tantanan'ny vondrom-piarahamonina ny JR, izay manome sakafo azo antoka ho an'ireo karazana voromaherimpaty sady hanaovana fanentanana ho an'ny faritra voaaro Vulture Safe Zone (VSZ). Ny voromaherimpaty lava vava sy manana rambony fotsy izay efa atahorana ho lany tamingana eran-tany dia mamelona sy mitaiza ny zanany ao amin'ny faritra Nirmal Pokhari sy Bharat Pokhari nandritra ny taona maro.
Voromaherimpaty mihinana fatin'omby eo amoron'ny renirano Fhusre. Sary avy amin'i Krishna Mani Baral tao amin'ny Nepali Times. Nahazoana alàlana.
Antsasaky ny ampolony mahery ankehitriny ny toeram-pisakafoana jatayu ao amin'ny distrikan'i Nawalparasi, Rupandehi, Dang, Kailali, Kaski ary Sunsari manerana ny faritr'i Tarai sy eny ampototry ny tendrombohitra. Nahatonga ny famerenana indray ny isan'ny voromaherimpaty ao Nepal, izay nihena ho 20.000 raha 1,6 tapitrisa izany teo aloha ny ezaka natao.